१ सय ४८ वर्षपछि भोलि जुर्ने भयो दुर्लभ संयोग, ४ राशिलाई लाभै-लाभ ! – Sandesh Press
June 13, 2021 277
एजेन्सी – बिहिबार ज्येष्ठ कृष्णपक्ष औंसीमा दुर्लभ संयोग जुर्ने भएको छ। शनि जयन्ति समेत रहेको बिहिबारको दिन सूर्य ग्रहण पनि लाग्ने भएकाकारण दुर्लभ संयोग जुर्ने भएको हो।
नेपाली समय अनुसार सूर्य ग्रहण बिहिबार दिउँसो १ बजेर ५७ मिनेटमा शुरु भएर ६ बजेर ५६ मिनेट सम्म लाग्दैछ। यसरी शनि जयन्तिका दिन सूर्य ग्रहण लागेको कयौं वर्ष पछि दुर्लभ संयोग जुर्नेछ। ज्योतिषीहरुका अनुसार शनि जयन्तिका दिन सूर्य ग्रह १ सय ४८ वर्ष पछि लाग्न लागेको हो।
बिहिबार लाग्ने ग्रहण मुख्यतः अमेरिका, यूरोप, एशिया, उत्तरी क्यानाडा, ग्रीनल्याण्ड र रूसमा देखिनेछ। नेपालबाट भने उक्त ग्रह देखिनेछैन। नेपालबाट नदेखिने हुँदा बिहिबार लाग्ने ग्रहणको नेपालमा सूतक लाग्नेछैन।
ग्रहण वृष राशि र मृगशिरा नक्षत्रमा लाग्ने ज्योतिषीहरु बताउँछन्। शनि जयन्तिका दिन लाग्ने ग्रहणका कारण सबै भन्दा बढी वृष राशिलाई नकारात्मक असर पर्नेछ। त्यसका अलावा मेष र मिथुन राशिलाई पनि ग्रहण सँगै बनेको संयोगले दुख दिनेछ।
कुन-कुन राशिलाई लाभ ?
१ सय ४८ वर्ष पछि जुर्ने दुर्लभ संयोग कर्कट राशि हुनेहरुका लागि धेरै नै फलदायक सावित हुने देखिन्छ। विभिन्न क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ मिल्नेछन्। धेरै समय देखि भेट नभएका प्रियजनबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनुका साथै उपहार पनि प्रप्त हुनेछ। महिला मित्रहरुबाट विशेष लाभ मिल्नेछ। सन्तान र जीवनसाथीबाट पूर्ण सहयोग मिल्द महत्वपूर्ण कार्य सफल हुन सक्ला।
व्यावसायिक रुपमा ग्रहण सँगै जुर्ने संयोग अत्यन्तै लाभप्रद सावित हुनेछ। आर्थिक रुपमा नसोचेको लाभ मिल्ने देखिन्छ। आर्थिक पक्ष बलियो हुँदा मानसिक रुपमा रहेका समस्या देखि छुटकारा मिल्नेछ। नयाँ कार्य थालनीका लागि लगानी जुट्न सक्छ। कार्यक्षेत्रमा नसोचेको सकारात्मक परिवर्तन गराउन पनि ग्रहणसँगै जुर्ने संयोगले सहयोगी भूमिका निभाउन सक्ला।
सूर्य ग्रहणसँगै जुर्ने संयोग वृश्चिक राशि हुनेहरुका लागि धेरै नै लाभप्रद रहनेछ। मनोरन्जन केन्द्रित खर्च बढेपनि आर्थिक रुपमा कुनै समस्या रहनेछैन। आम्दानीका नयाँ-नयाँ श्रोत फेला पर्नेछन्। मान-सम्मानमा पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। वाहन सुख प्राप्त हुन सक्ला। प्रेम तथा पारिवारिक जीवन पनि उल्लासमय बनाउन १४८ वर्ष पछि बन्ने संयोगको भूमिका रहनेछ।
सूर्य ग्रहणसँगै जुर्ने संयोगले कुम्भ राशि हुनेहरुको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन नै परिवर्तन गराउने देखिन्छ। परिवारमा रहेका कलह स्वतः हराएर जानेछन्। प्रेमिसँगका मतभेद पनि हट्न सक्लान्। व्यवसायमा नसोचेको प्रगति हुँदा आभूषण, वस्त्र, सौन्दर्य-प्रसाधनमा खर्च भएपनि आर्थिक भार पर्नेछैन। विद्याप्राप्तिमा पनि सफलता मिल्न सक्ला।
Prevज्ञानेन्द्र शाहीलाई आ’क्रम’ण गर्ने छ जना टोले डनहरू पक्राउ, हेर्नुहोस् यिनीहरूको अनुहार (भिडियो हेर्नुहोस्)
Nextसबिता भण्डारी प्रकर’णबारे ज्यो’तिषीको ड’ रला’ग्दो खुलाशा, म’ र्नुको खास कारण यस्तो प्र’माणसहित गरे ठो’कुवा ह”त्यारा पत्ता लाग्यो ? ( हेर्नुस)
श्रीमतीले जिम्मा लगाएकी थिइन् श्रीमान अर्जुनलाई यी युवकको जिम्मा, राती २ जना घर भित्र आएर श्रीमतीसंग गरेका थिए यस्तो कुरा (भिडियो सहित)